July 13 မှာ kyliecosmetics ရဲ့ အသစ်ထွက်လာတော့မယ့် summer collection လေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » July 13 မှာ kyliecosmetics ရဲ့ အသစ်ထွက်လာတော့မယ့် summer collection လေး
July 13 မှာ kyliecosmetics ရဲ့ အသစ်ထွက်လာတော့မယ့် summer collection လေး
Cosmetics နဲ့ ပတ်သက်ရင် နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေကို ပေးနေကြဆိုတော့ အခုလည်း အချစ်တို့သိလောက်တဲ့ brand လေးကို ပြောပြမှာနော်။ အဲ့ brand က လူသိလည်း များတယ်။ အဲ့ brand owner ကြီးကိုလည်း လုံးဝကို ကြွေလောက်စရာကြီးဆိုတော့ ဘယ်သူလေးလဲသိလား?
Kylie Cosmetics ပါ။ သိကြတယ်ဟုတ်။ မခိုင်လီကတော့ collection တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို ရူးခါနေအောင်လှတဲ့ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ထုတ်တတ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်ပြီလေ။ Orange ဘက်ကို inspired လုပ်ထားတဲ့ collection မျိုးဖြစ်လို့ မျက်နှာကို လင်းစေပြီး warm tone look ကိုရစေနိုင်တယ်လေ။
Lipstick, Eyeshadow palette တွေရော ထုတ်လိုက်တော့ ကြွေပြီလေ။ နာမည်လေးကတော့ Summer collection ပါ။ July 13 မှာ official ရောင်းချပေးမှာပါနော်။ ဘာတွေပါလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ အဝင်းပြောသလိုပဲ စိတ်ခုန်နေပြီ😝
ဒီ collection မှာတော့ eyeshadow palette တစ်ခု, Matte Lipsticks5ခုပါတဲ့ set တစ်ခုရယ်, Lip gloss ရယ်ပါဝင်ပါတယ်။
Eyeshadow အရောင်တွေကတော့ တစ်ခြား brand တွေမှာလည်းထွက်ပြီးသား ရှိပြီးသားအရောင်တွေနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ခံစားရလို့ မထူးဆန်းပေမယ့် lipstick အရောင်တွေကတော့ တကယ့်ကို မြင်မြင်ချင်းကြွေချင်စရာပါ။
အရောင်က ၅ ရောင် ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ admin ကြွေတာလေးကတော့ nude ရောင်လေးနှစ်ရောင်ပါ။ ထုပ်ပိုးထားတာရော ဘူးပုံစံရောက လုံးဝရိုးစင်းပါတယ်။ မခိုင်လီရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း kylie ဆိုတာကြီးပဲ ထိုးတာလေးတော့ပါသေးတယ်လေ။
Eyeshadow အရောင်တွေက ပြောရရင် Morphe 35O မှာရော 35O2 ရဲ့ အရောင်တွေနဲ့ဆင်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ သိပ်တော့မကြွေဘူးရယ်။ အရောင် ၁၄ ရောင် ပါဝင်ပြီးတော့ ထုပ်ပိုးမှုက တစ်ခြား eyeshadow palette တွေလိုဘဲ မှန်လေးနဲ့ notebook လိုမျိုးလေ။
မခိုင်လီရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း lip liner လေးနဲ့ lipstick လေးနဲ့ တွဲထွက်တာလေးကတော့ မပါမဖြစ်လေ။ အခုလည်း နှစ်ခုထွက်မှာပါ။ အရောင် ၂ရောင်ပေါ့နော်။ အဝါလေးက Candy K လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ လိမ္မော်လေးက On wednesdays လို့ ပေးထားပါတယ်။ On wednesdats လေးကတော့ တကယ့်ကို hot pink အရောင်လေးပါ။ ရှားတဲ့အရောင်လေးနော်။
Chill Peel super glitter gloss from the SUMMER18’ Limit လို့ IG မှာ ရေးပြီး တင်ထားပါတယ်နော်။
July 13 မှာ official launch လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒါလေးတွေက Kylie ရဲ့ IG ကရော stories တွေကပါ သွားမလာတာနော်။ ဉီးဉီးဖျားဖျားပြချင်လွန်းလို့လေ အသဲတို့ကို 😊
အောက်ဆုံးမှာ On wednesdays လေးကို ဆိုးပြထားတာလေးကို လည်း အဆစ်ထည့်ပေးထားသေးတယ်နော်။
the perfect pink 💕 our brand new lip kit ON WEDNESDAYS launches this FRIDAY! KylieCosmetics.com
A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Jul 11, 2018 at 5:15pm PDT
Camila Cabello လေးနဲ့ L'oreal Paris တို့ရဲ့ summer အတွက် Havana Collection လေး